We.com.mm - ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုခိုင်းတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကကျောင်း။စာခိုးချမှာစိုးလို့လား?ဘာကြောင့်လဲ?
ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုခိုင်းတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကကျောင်း။စာခိုးချမှာစိုးလို့လား?ဘာကြောင့်လဲ?
ခေတ်အခါက တိုးတက်လာတော့ ခိုးချတဲ့နည်းလမ်းတွေကလည်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင်ပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ စာတွေရေးခဲ့တာ၊ spot စာရွက်တွေကို နေရာမျိုးစုံမှာ ဖွက်လာတာ၊ စာရွက်လဲဖြေတာ၊ ဘေးကသူငယ်ချင်းကို မေးတာ၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ Spot စာရွက်တွေနဲ့ ခိုးမချရဲရင်တောင် အနည်းဆုံး အနီးနားက သူငယ်ချင်းကို စာပြခိုင်းတာ၊ လှမ်းကြည့်ပြီး ခိုးချတာမျိုးတော့ ရှိကြတာပဲလေ။ ဉာဏ်များလွန်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ ဆရာတွေလည်း ဉာဏ်များဖို့လိုလာတာပေါ့။
ဒီပုံလေးတွေကိုတော့ Malee Kawsanthia ဆိုတဲ့သူက သူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့တာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ Rajamangala နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားတွေဟာ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ။ အခုအဖြစ်အပျက်ဟာ အနီးနားက စာခိုးချတဲ့ နည်းလမ်းကို ကာကွယ်ဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပြီး လူမှုကွန်ယက်မှာ တော်တော်လေး နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကလည်း ရယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ဝေဖန်ကြသလို၊ အချို့ကလည်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတာပေါ့။
တကယ်တမ်းကျတော့ စာမေးပွဲမှာ ခိုးချမှာစိုးလို့ ဦးထုပ်ဆောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ အထင်မှားနေတာကြောင့် Rajamangala နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ရှင်းလင်းချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်က “100% Helmet AIT RMUTI” ဆိုတဲ့ ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွက် လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ ကျောင်းသားတွေဟာ စက်ဘီးစီးတဲ့အခါ လုံခြုံရေးအရ ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းကြရပါတယ်။ facebook မှာတက်လာတဲ့ပုံကလည်း ကျောင်းသားတွေစာမေးပွဲမစခင် တက်ရောက်သူ စာရင်းစစ်တဲ့အချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ဆောင်းထားရတာပါ။
ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လို့ ကျောင်းသားတွေက ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အထင်လွဲမှားစရာတွေ ဖြစ်သွားလို့ တောင်းပန်ကြောင်းလည်း တက္ကသိုလ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှ ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကျောင်းက အခုလို ရှင်းပြခဲ့ပေမယ့်လည်း လူမှုစာမျက်နှာက လူတွေကတော့ ဒီကိစ္စကို စနောက်စရာ တစ်ခုအဖြစ် ပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ အထင်လွဲကြတာလည်း ဆန်းတော့မဆန်းပါဘူး။ သိပ်မကြာခင်တုန်းကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာတစ်ယောက်က ကျောင်းသားချင်း စာခိုးချမှာစိုးလို့ ထီးဆောင်းပြီး ဖြေခိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ ရှိခဲ့တာကိုး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်တုန်းကလည်း ထိုင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုကပဲ အလားတူပုံစံမျိုး လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ခေါင်းမှာ စာရွက်နှစ်ရွက်ကို တစ်ဖက်တစ်ရွက်စီကာပြီး နဖူးမှာစီးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ရယ်ရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒါက စာမခိုးချအောင်လုပ်တဲ့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ ကျောင်းသားတွေ ဉာဏ်များတာလောက်တော့ ဆရာတွေက သနားတယ်ဆိုပဲ။
(အထက်ပါ သတင်းနှင့်ပုံသည် Malee Kawsanthia ၏ Facebook စာမျက်နှာမှ Malee Kawsanthia ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
လေကျင့်ပေးတဲ့ ထရိန်နာက နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလို့ သိပ်လှနေတဲ့ အဖြူရောင် ဝေလငါးကြီး
လေးခွနဲ့ ပစ်ခတ်တဲ့အပြင် တားဆီရေးဂိတ်ကိုပါ တိုက်ဖျက်ခဲ့လို့ တိုးဂိတ်မောင်တံ ကျိုးပျက်ခဲ့ရ
12 months ago by Mozex
လူပေါင်း ၄၈ သန်းမှာတောင်တစ်ယောက်တွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ထူးခြားချက်
အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု နဲ့ သရုပ်ဆောင်သီဟတင်စိုးကိုအမှုဖွင့်ထား
ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ အမည်ခံ အလှူခံကန်ရိုက်များနဲ့ ဈေးကွက်အကြောင်း
မြေပြင်စူးစမ်းလေ့လာရေး ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တုကို လာမယ့် ၂၀၂၀ မှာ မြန်မာလွှတ်တင်မည်
ကျွန်မမိသားစုကို ကာကွယ်ရမယ် လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ F4 မင်းသမီးလေး Ku Hye Sun ရဲ့ရင်ဖွင့်စကား
10 months ago by Sora
Myanmar’s Pride Awards 2019 ရဲ့ လူမှုအကျိုးပြုကဏ္ဍအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်များအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
အခြားမိန်းမကို လှတယ်ပြောမိလို့ ချစ်သူရဲ့ အင်္ဂါကို ဓားနဲ့ လှီးဖြတ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
မကြာခဏ ဇက်ကို တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်အောင် ချိုးတတ်သူများ သတိပြုဆင်ခြင်ဖွယ်
လူတွေသင့်ကိုမုန်းတီးတဲ့အခါ သင့်ဘက်က နေထိုင်ပြရမယ့်အချက် (၅) ချက်